Singobani - NBC Electronic Technologic Co., Ltd.
INBC Electronic Technologic Co., Ltd. (NBC) izinze eDongguan City, eChina, namahhovisi eShanghai, eDongguan (Nancheng), eHong Kong nase-USA. Igama lomkhiqizo lenkampani, i-ANEN, liwuphawu lokuphepha komkhiqizo, ukuthembeka nokusebenza kahle kwamandla. I-NBC ingumkhiqizi oholayo we-electroacoustic hardware nezixhumi zamandla. Sisungule ubudlelwano bomlingani wesikhathi eside nemikhiqizo eminingi ephezulu yomhlaba. Imboni yethu isidlulile ISO9001, ISO14001, IATF16949 izitifiketi.
Ngokuhlangenwe nakho okungaphezu kweminyaka engu-12 kuzinto ze-electroacoustic hardware hardware, izinsizakalo zethu zifaka ukwakheka, ukusebenzisa izinsimbi, ukunyathela izinsimbi, i-Metal Injection Molding (MIM), ukucutshungulwa kwe-CNC, kanye ne-laser welding, kanye nokuqedelwa kobuso njengokufakwa kwesifutho, i-electroplating, kanye nomzimba ukubekwa komhwamuko (PVD). Sinikezela ngemithombo ehlukahlukene yebhande lasekhanda, izilayida, amakepisi, amabakaki nezinye izinto ezenziwe ngezifiso zezingxenyekazi zekhompiyutha ezinhlobonhlobo eziningi eziphezulu zomkhiqizo nezinhlelo zomsindo, ngekhwalithi ephezulu kanye nesiqinisekiso sokuthembeka.
Njengenkampani ye-tech ephezulu enokuthuthukiswa komkhiqizo okuhlanganisiwe, ukukhiqizwa, nokuhlolwa, i-NBC inamandla okuhlinzeka ngezixazululo eziphelele ezenziwe ngokwezifiso. Sinamalungelo obunikazi angama-40 + nempahla yobuhlakani ezithuthukise. Izixhumi zethu ezigcwele zamandla ochungechunge, ezisukela ku-1A kuye ku-1000A, zidlulile izitifiketi ze-UL, CUL, TUV, ne-CE, futhi zisetshenziswa kakhulu ku-UPS, ugesi, ezokuxhumana ngocingo, amandla amasha, izimoto nezicelo zezokwelapha. Siphinde futhi sinikeze ngokunemba okuphezulu okwenziwe ngezifiso nezinsiza zokuhlanganisa ikhebula ukubhekana nezidingo zamakhasimende.
I-NBC ikholelwa ukuthi ifilosofi yebhizinisi "yobuqotho, ubugagu, ukuzuzisana, nokunqoba". Umoya wethu "ukuqamba, ukubambisana, futhi silwele okungcono kakhulu" ukuhlinzeka amakhasimende ngekhwalithi engcono kakhulu nenani lokuncintisana. Ngokwengeziwe ekugxileni ekusungulweni kobuchwepheshe kanye nekhwalithi yomkhiqizo, i-NBC nayo izinikela ngezinsizakalo zomphakathi nakuma-welfares wezenhlalo.